Mountain Television nation's first popular and leading analytical news channel. Mountain covers all the latest news from Nepal, Political News, Science news, Social news, Sport news, Ecomony news, Business, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actores, Audio, Video, Interview and many more. एमसीसी कर्यदलको बैठक : छलफलका विषयहरु अभिलेख गर्ने निर्णय – Emountain TV
एमसीसी कर्यदलको बैठक : छलफलका विषयहरु अभिलेख गर्ने निर्णय
काठमाडौं, २ फागुन । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को केन्द्रीय समितिले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) को विषयमा अध्ययन गर्न गठित कार्यदलको बैठक शुक्रबार पनि बसेको छ ।
बैठकले एमसीसीको विषयमा प्राप्त भएका सामग्रीहरुमाथि छलफल गरेको छ । कार्यदलका सदस्य भीमबहादुर रावलले अहिलेसम्म प्राप्त सामग्रीहरुमाथि अध्ययन गरी समितिका सदस्यहरुबीच छलफल भएको बताउनुभयो । उहाँले समितिले तथ्यको आधारमा छलफल गरेको र छलफलका विषयहरु अभिलेख गर्ने निर्णय भएको बताउनुभयो ।
रावलले एमसीसीका विषयमा प्राप्त सामग्रीहरुमाथि अझै अध्ययन गरी अभिलेख गर्दै जाने निर्णय पनि गरिएको बताउनुभयो । कार्यदलको बैठक छिट्टै बस्ने उहाँले बताउनुभयो ।
नेकपाभित्रै एमसीसीका विषयमा तिव्र आलोचना भएपछि नेकपा केन्द्रीय समितिको बैठकले एमसीसीका विषयमा अध्ययन समिति गठनको मागको गरेको थियो । केन्द्रीय सदस्यहरुको माग अनुसार गठन भएको समितिले १० दिनभित्र अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउन भनिएपनि समितिले भने अझै समयको माग गरेको छ ।
By: एमसीसी कर्यदल
सरकारले चीनबाट किनेको स्वास्थ्य सामग्री नेपाल आइपुग्यो
प्रदेश २ सरकारले ल्याउने भयो यस्तो प्याकेज
लकडाउन लम्ब्याउन मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्दै